Semita - Wikipedia
Ny Semita na vahoaka semitika dia ireo vahoaka rehetra miteny semitika, ka amin' ireo vahoaka tamin' ny Andro Taloha dia isan' ny Semita ny Arameana sy ny Arabo ary ny Kananita na Kananeana (isan' ireo ny Hebreo). Tamin' ny voalohany dia ny vahoaka lazaina ao amin' ny Bokin' ny Genesisy ao amin' ny Baiboly fa taranak' i Sema, zanaka lahy voalohan' i Noa (Gen. 10.21-32) no Semita. Lazaina fa ny Semita no namorona ny abidy voalohany. Tao aminy koa no nandrosoan' ny fivavahana telo lehibe abrahamika, dia ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo.
Fitsinjarana ara-jeôgrafian' ny fiteny semitika
Ny faritra niavian' ny Semita dia tsy fantatra. Misy ny milaza fa avy any Azia Atsimo-Atsinanana izy ireo, misy koa ny milaza fa avy any Arabia izy ireo. Ny arkeôlôjia dia maneho fa niparitaka manerana an' i Mesôpôtamia ny vahoaka miteny semitika alohan' ny hanorenany kolontsaina an-tanàn-dehibe tao amin' io faritra io. Nanomboka tamin' ny fotoana talohan' ny tantara dia nanao andiany maro nifanesy ireo vahoaka mpifindrafindra monina semita ireo ka namakivaky ny tany efitra any Atsinanana hankany amin' ny Volan-tsina-Mahavokatra. Ankehitriny dia mivangongo ao Afovoany Atsinanana sy ao Afrika Avaratra ary ao amin' ny Tandrok' i Afrika ny Semita, indrindra fa ny Arabo. Nisy akony tany Eorôpa sy any Amerika anefa izy ireo tamin' ny alalan' ny Jiosy am-pielezana, hatrany atsimon' i Sahara sy ao amin' ny Zana-Kôntinenta Indiana tamin' ny alalan' ny Arabo.
1 Vahoaka semita
1.1 Ny Arameana
1.2 Ny Kanaanita
1.3 Ny Hebreo
1.4 Ny Arabo
2 Ny fiteny semitika
Ny Arameana na Aramiana dia vahoaka niaina tao Atsinanana Akaiky tamin' ny Andro Taloha izay nonina tamin' ireo faritr' i Siria sy Mesôpôtamia tamin' ny taonarivo voalohany tal. J.K. Maro ireo fanjakana arameana madinika izay nandroso tamin' ny taonjato faha-11 hatramin' ny faha-10 tal. J.K. nandritra ny fiandohan' ny Andron' ny Vy. Tsy mba nanana kolontsaina na fanjakana miray anefa ny Arameana. Teo an-tenantenan' ny taonarivo voalohany tal. J.K. izy ireo dia lasa maro an' isa tao amin' ny mponin' i Asiria sy i Babilônia ka nahatonga ny fiteny arameana hiely manerana ny faritra Atsinanana Akaiky tamin' ny Andro Taloha.
Ny Kanaanita dia ireo vahoaka nonina tao amin' ny faritra atao hoe Kanaana, izay tao andrefan' ny ony Jordana (na Jordany). Nonina tsikelikely tao Kanaana ny Israelita nanomboka tamin' ny taonarivo faha-2 tal. J.K. na mety efa talohan' io aza. Angamba koa avy amin' ny fitenin' ireo Kanaanita no nahazoan' ny Israelita ny fiteny hebreo.
Ny Hebreo na Hebrio dia vondrom-poko semitika izay nifindra avy any Mesôpôtamia nankany Kanaana tamin’ ny taonarivo faharoa tal. J.K. Izy ireo no heverina fa razamben' ny Jiosy na Jody ankehitriny. Araka ny Baiboly dia avy any Kanaana ka nankany Egipta (na Ejipta) ny ampahany amin’ ireo Hebreo ireo, dia ireo taranak’ i Jakoba, atao hoe Israelita na Zanak’ i Israely, ka lasa andevon’ ny Egiptiana (na Ejipsiana). Rehefa afaka tamin’ ny fanandevozana izy ireo dia nivezivezy tany an-tany efitr' i Sinay hankany Kanaana indray. Ny Jiosy na Jody dia ireo Hebreo niaina tao Jodà taorian' ny fahababoan' ny mponina tao Jodà avy tany Babilôna.
Ny Arabo dia ireo olona miteny arabo sady manana kolontsaina arabo avy ao amin' ny saikanosin' i Arabia ka miparitaka ao Afrika Avaratra sy ao Atsinanana Afovoany ary ao amin' ny Saikanosin' i Arabia.
Ny fiteny semitikaHanova
Ny fiteny semitika dia vondrom-piteny ampiasain' ny mponina any Atsinanana Akaiky (Azia Atsimo Andrefana) sy ao Afrika Avaratra ary ao amin' ny Tandrok' i Afrika. Isan' ireo fiteny atao hoe hamitô-semitika na afrô-aziatika na afraziana izy ireo ka miely avy amin' ny tapany avaratr' i Afrika hatrany Atsinanana Akaiky. Amin' izao fotoana izao dia ireto avy ny lehibe amin' ireo fiteny ireo: ny fiteny arabo, amarîka, tigrinia, hebreo, sôreta (na arameana atsinana vaovao), arameana andrefana vaovao, maltey ary siriaka. Mampiavaka ny fiteny semitika ny fampiasana fototeny foronin-drenifeo telo sy ny fampiasana renifeo tononina am-bavatraoka sy an-janadela ary anterina mafy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Semita&oldid=1037469"
Dernière modification le 6 Septambra 2021, à 07:02
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 07:02 ity pejy ity.